Ilmo lix bilood jira oo soomaali ah oo maydkiisa laga helay bada Talyaaniga - NorSom News
Ilmo lix bilood jira oo soomaali ah oo maydkiisa laga helay bada Talyaaniga
Foto: Christian Buettner/Eikon Nord GmbH Germany/Handout via Reuters
Ururka Sea-Watch oo laga leeyahay wadanka Germalka kana shaqeeya bad-baadinta dadka ay doomuhu la dagaan iyo meydad kasoo saarida bada xeebaha u dhaxeeya Talyaaniga iyo Libiya ayaa jimcihii lasoo dhaafay bada ka helay meydka ilmo yar oo soomaali ah. Booliska Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in ilmahan yari ee bada ku saqiiray uu yahay soomaali,lana socday hooyadii oo bada ku dhimatay. Waxay sheegeen in sawirka maydka cunuga ay tuseen dadkii lasoo badbaadiyay, ayna heleen abtigii uu kamid ahaa dadka lasoo badbaadiyay. Meydka ilmahan yar oo markii hore la rabay in lagu aaso qubuuraha dadka aan la aqoonsan, ayaa hada waxaa lagu aasi doonaa qubuuraha caadiga ah, maadaama ay heleen ilmaha magaciisa.
Doonta waday ilmahan iyo hooyadii oo bada ku qalibantay ayaa waxaa saarnaa 400 00 qof, waxaana laga badbaadiyay 135, halka maydkooda la helay 45 qof oo kale.
Hada oo kale xiliga kuleylaha waxaa aad usoo bato dadka doomaha kasoo raacayo wadamada Masar iyo Libya, iyaga oo raba inay soo gaaraan wadanka Talyaaniga ugana sii gudbaan wadamada kale ee Yurub. Soomaalida ayaa kujirto kaalinta sadexaad ee dadka ugu badan ee soo gaaray talyaaniga iyaga ku xigo dadka ka imaanayo wadamada Nigera iyo Gambia.
Previous articleUDI: Xaalada amaan ee qaybo kamid ah Soomaaliya wax badan ayaa iska badalay
Next articleOlole lagu doonayo inay xilka isaga dagto Sylvi Listhaug oo si weyn uga socda internetka